तीनवटा कार्यालयको लेखा हेर्न एउटा लेखापाल — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > तीनवटा कार्यालयको लेखा हेर्न एउटा लेखापाल
बैतडी । लेखामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा बैतडीमा एउटै लेखापालले तीन÷तीन वटा कार्यालयको लेखा फाँट हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बैतडीका लेखापाल भाष्करप्रसाद पन्तले कोष, भू–संरक्षण र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय गरी तीन कार्यालयको लेखाफाँट हेर्दै आएका छन्। कोष, प्राविधिक कार्यालय सदरमुकाम र भू–संरक्षण कार्यालय सदरमुकामबाट ४० किलोमिटर टाढा पाटनमा पर्छ । दुईतिर कार्यालय भएपछि उनलाई समय मिलाउन हम्मेहम्मे पर्छ ।
दुई÷तीन कार्यालय हेर्नु पर्दा समयमै काम सम्पन्न नभएर सेवाग्राही मारमा परेका छन् भने लेखापालसमेत समस्यामा छन् । “गाउँपालिका पुग्न एक दिन लाग्छ,” लेखापाल ओझाले भने – “कहिले स्वास्थ्य कहिले गाउँपालिका हेर्नुपर्दा खाना खानेसमेत फुर्सद छैन ।” दुवै कार्यालयको कामको चापका कारण समयमै काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
जिल्लास्थित आधा दर्जन सरकारी कार्यालय पाटनमा छन् । सदरमुकाम र पाटन दुवैतिरका कार्यालय हेर्दै आएका लेखापाललाई मात्र होइन थप गाउँ÷नगरपालिकाको लेखा हेर्न सास्ती हुने गरेको जिल्ला निर्वाचन र मेलौली नगरपालिकाको लेखा हेर्दै आउनुभएका भानदेव जोशीले बताए।
“सदरमुकामस्थित कार्यालय पुग्दा लेखापाल गाउँ÷नगरपालिकातिर हुन्छन्,” मेलौलीका सुरत पार्कीले भने, एउटै व्यक्तिले दुईतिरको कार्यालय हेर्नुपर्दा समयमा काम हुन सकेको छैन ।” स्थानीय तहले समयमै उपभोक्ता समिति गठन नगरिँदा र लेखापालको अभाव हुँदा विकास बजेट थोरै मात्र खर्च गर्न सकेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा जिल्लाका स्थानीय तहले औसतमा करीब ३० प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्चेका छन् ।
फिल्डमा हुने योजनाको सबै काम सकिए पनि लेखापालको नियमित उपस्थिति नहुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । लेखापाल नियमित नहुँदा वित्तीय प्रगतिसमेत गर्न नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भए जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने गरी विकास गरेर देखाउने सुर्नया गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताए ।
२०७४ चैत्र ५ गते १५:२८ मा प्रकाशित
कृषकलाई दिनुपर्ने १८ करोड रकम झ्वाम पार्ने इस्टर्न सुगर मिललाई के कारबाही हुन्छ सरकार ?
लौ अब बामपन्थी भए ज्वाइँ बन्न पाईयो,नत्र पाईएन !विज्ञापन…
बोनस पाउने गरी मेलम्चीको काम तीव्र, असारसम्ममा पानी आउने !
प्रभु र ग्राण्डका सेयर धनीलाई खुशीको खबर, सम्पूर्ण सेयर कारोबार फुकुवा !